ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေးကျင့်စဉ် ``GAqP´´ သင်တန်း တွံတေးမြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်Local News
Diver captures 'incredible' footage of great whites, tiger sharks feasting on whale carcass Updated Sat at 8:59amInternational News
A diver has captured "incredible" footage ofagroup of sharks, including great whites, feeding off the carcass ofadead sperm whale in waters off Coffs Harbour, on the New South Wales mid north coast.
၁၀/၂၀၁၆ ကြိမ်မြောက် သားငါးကဏ္ဍဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များ ပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲMeeting
- မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ သဘာပတိ၊ နာယက ဦးစိုးဝင်းက ဇွန်လ(၄)ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် MOALI ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်ပြီး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသင်းများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များအားလုံး၏တင်ပြမှု၊ ဆွေးနွေးမှုများကို လက်ခံ၍ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ ယင်းအစည်းအဝေးတွင် ၀န်ကြီးက ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများကို လက်ခံဆွေးနွေးပေးရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း၊ အင်္ဂါအစည်းအဝေးကို ကိုယ်တိုင် မတက်နိုင်လျှင် ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်ပေးပြီး ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများကို ၀န်ကြီးက ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ပြောကြားသွား ကြောင်း၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ၀န်ကြီးထံပြန်တင်ပြရန်နှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ကတိပေး သွားကြောင်း၊ ဖြေရှင်းရာတွင်လွယ်ကူစေရန် တင်ပြမည့်အကြောင်းအရာများကို တိုတိုရှင်းရှင်းတင်ပြရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ သုတေသန နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ အမှန်တကယ်လိုအပ်ကြောင်းကို ၀န်ကြီးလက်ခံကြောင်း၊ မွေးမြူသည့်နေရာ၊ ဆောင်ရွက်သည့်အခြေ အနေ၊ ဖမ်းဆီးနေမှုစသည့် အတွေ့အကြုံများတင်ပြသည့်အခါ ၁၀ မိနစ်ခန့်သာဆွေးနွေးရန်ဖ်ြဖစ်ပြီး ကျန်ရှိသည့်ကို အထေ ထွေပိုင်းကျမှ ဆွေးနွေးကြစေလိုကြောင်း၊ ပင်လယ်ငါးဖမ်းရေလုပ်သားများအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်သောကိစ္စများကို လွှတ်တော်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်တို့ ကွင်းဆင်းပြီး ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများ အား လေ့လာမှုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ ဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စများကို မြန်မာနိုင်ငံ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိစေလိုကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်များက လည်း မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်သို့ ဆက်လက်တင်ပြသွားရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဖြစ် ကြောင်း၊ စည်းကမ်းရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုး ရေးမှာ အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ငါးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် မွေးမြူရေး၊ ဖမ်းဆီးရေးစသည့်လုပ်ငန်းများတွင် မှတ်တမ်းများနှင့် ဆောင် ရွက်သွားကြရန်လိုကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ကျင်းပခဲ့သော SEMINER များSeminar
ငါးဈေးနှုန်းနှင့် မွေးမြူရေးအစာဈေးနှုန်းများMarket Price
-မြန်မာ့ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့မှုပမာဏနှင့် ရရှိသော နိုင်ငံခြားဝင်ငွေများProduction
Strength of MFF Membership
As of Dec 31, 2014, the total number of MFF and funcional Associations members amounts to 34455.
MFF (ie-A class individuals : 29504, A class companies : 840).
Funcional Associations (ie-A class individuals : 3569, A class companies : 542)
တီလားပီးယားထုတ်လုပ်မှုမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တိုးတက်လာနိုင်Features
ရေချိုငါးဈေးနှုန်းတစ်ပိဿာလျှင် ၁၀၀ ကျပ်ခန့်လျော့ကျနေပါကြောင်း၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး တီလားပီးယားထုတ်လုပ်မှုမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တိုးတက်လာနိုင်ပါကြောင်း၊ အကြီးဆုံးဈေးကွက်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံဖြစ်ပါကြောင်း၊
အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ စိုက်ပျိုးရေးပညာသင်ကြားမည့် သင်တန်းသား/သူများ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့လေကြောင်းခရီးဖြင့်ထွက်ခွာActivities
- အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ စိုက်ပျိုးရေးပညာသင်ကြားမည့် သင်တန်းသား/သူ(၁၂)ဦးသည် မြန်မာ စံတော်ချိန်(၁၈:၂၀)နာရီတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သုဝဏ္ဍဘူမိအပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာသွားပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သုဝဏ္ဍဘူမိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှတဆင့် အစ္စရေးနိုင်ငံ၊ BEN GURION INTERNATIONAL AIRPORT သို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပါသည်။